Kọwaa ozi sitere na ekwentị mkpanaaka gam akporo tupu ịre ya | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe m ga-eme tupu ere ekwentị gam akporo m?
Ọtụtụ ndị na-ege ntị na mwepụta nke ndị ọrụ mkpanaka ọhụrụ, nke na-enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụrụ yana n'etiti mkpebi nke igwefoto dị n'ihu pụta, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-ejikarị n'ihi ya, enwere ike ime Selfies a ma ama.
Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara mmadụ ji anwa ire ire ekwentị ha ugbu a iji nwee zuta ohuru ohuru. Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ a, anyị na-akwado ka ị soro aro ndị a anyị ga-ekwupụta n'okpuru, ebe ọ ga-adabere na ihe onye nwe ọhụrụ nke ekwentị gam akporo ochie gị nwere ike ịlele na ngwaọrụ ahụ.
1 Ihe onye obula choro iji kpuchido ekwenti ha gam akporo
2 Izuzo ozi anyị na ekwentị mkpanaaka gam akporo
3 Laghachi na “Ọnọdụ orylọ ọrụ” na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo
4 Zọpụta akụkọ ifo ma hichapụ ya na ekwentị mkpanaaka gị gam akporo
Ihe onye obula choro iji kpuchido ekwenti ha gam akporo
Nyere na taa ọtụtụ ekwentị mkpanaaka gam akporo nwere igwefoto mara mma, ọ na-abịa ezigbo ihe ngba iji weghara ihe kacha mma na ndụ anyị site na onyonyo dị mfe; O di nwute na onyogho ndi a nwere ike imechu otutu ndi mmadu ihu, ma ha aghaghi ichebe ha ka onye ozo ghara ihu ha. Enwekwara akụkụ nke ozi ma ọ bụ mkparịta ụka site na nkata, ihe nwere ike ịdekọ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na obere ngalaba nke nchekwa nchekwa nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-akwado iji nyochaa ihe ị kwesịrị ime tupu ere gị iPhone ma ọ bụ iPad
Ihe anyị kwurula bụ naanị obere akụkụ nke akụkọ ahụ emere n'oge gara aga, ebee otu akụkọ nke Avast software na-ere O kwuru na "nrụpụta ụlọ nrụpụta" nke ekwentị ndị anaghị arụ ọrụ ka mmadụ chere. N'ime ihe ọmụmụ ahụ, ekwuru ya na ihe dị ka ekwentị mkpanaaka 20 yana sistemụ arụmọrụ gam akporo ejiri mee ihe maka ọmụmụ ihe ahụ, nke a gaara azụta site na eBay. N'ime ekwentị mkpanaaka ndị a, ihe karịrị foto 40.000, ozi-e 750 na ozi ederede ha na ndepụta nke kọntaktị 250 natara.
Izuzo ozi anyị na ekwentị mkpanaaka gam akporo
Site n'ihe anyị kwuru n'elu, nche na nzuzo nke ekwentị gam akporo anyị kwesịrị inwe Ọ kwesịrị ịbụ akụkụ dị oke mkpa; Otu n'ime ụzọ ndị ọzọ iji anabata bụ na "nzuzo nke ozi" na ngwaọrụ mkpanaka.
Anyị etinyela nseta ihuenyo na elu, ebe anyị na-anwa igosi usoro iji soro iji rụọ ọrụ a. Naanị ị ga-aga ntọala sistemụ arụmọrụ (gam akporo) wee họrọ nhọrọ n'aka ekpe nke na-ekwu «nchekwa«. N'aka aka nri ị ga-ahọrọ nhọrọ nke kwuru «ezoro ezo na ekwentị mkpanaaka«. N'ụzọ dị otu a, ị ga - echekwa ozi dị na ekwentị mkpanaaka gị gam akporo, izo ya ezo nke ga - egbochi ịnapụta ma ọ bụ weghachite ozi ị kagburu mbụ, ebe ọ bụ na onye ọ bụla gbalịrị ime ya ga - achọ igodo pụrụ iche iji wepu mkpọchi ahụ.
Laghachi na “Ọnọdụ orylọ ọrụ” na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo
Nke a bụ otu n'ime akụkụ kachasị mfe ịme, ihe nke ndị ọrụ jirila ụfọdụ ụdị nke ekwentị ndị a ga-enwerịrị usoro na usoro a.
Dị ka ihe oyiyi dị n'elu na-egosi, naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ ịga na sistemụ arụmọrụ ma emesịa, họrọ nhọrọ nke kwuru n'akụkụ aka ekpe "Ndabere na weghachite". Anyị ga-ahọrọ ozugbo nhọrọ nke ga - enyere anyị aka iweghachite ngwaọrụ mkpanaka ya na "ụlọ ọrụ mmepụta ihe", nke pụtara na a ga-ehichapụ data niile gụnyere nzere ndị anyị ji maka email anyị ma ọ bụ ịnweta ụlọ ahịa Google.
Zọpụta akụkọ ifo ma hichapụ ya na ekwentị mkpanaaka gị gam akporo
Nke a bụ ndụmọdụ ọzọ a na-enyekarị ndị ọkachamara nchekwa kọmputa; Nke bụ eziokwu bụ na mgbe anyị weghachite ngwaọrụ mkpanaka anyị na "Ọnọdụ orylọ Ọrụ" (dị ka anyị tụrụ aro n'elu), onye nwe ya na onye nwe ya na ekwentị mkpanaaka a kwesịrị tinye akụkọ ifo banyere akụrụngwa ị na-akwado ire. Nke a pụtara na mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe kwupụtara, anyị kwesịrị ichepụta listi nzipu ozi kọntaktị, gbakwunye onyonyo nke ụdị ọ bụla (nke nwere ike ibudata na Google) ma n'ezie, jikọta akaụntụ ụgha na ọrụ Storelọ Ahịa Google Play.
Mgbe ịmechara ọrụ a, ị kwesịrị ịlaghachi na "Ọnọdụ orylọ ọrụ" na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo. Mgbe ị na-ere ya, ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ọhụrụ ahụ chọrọ ịnaghachi ozi a, ọ ga-achọpụta na ọ bụ nke anyị tinyeburu na ọ bụ akụkọ ifo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Kedu ihe m ga-eme tupu ere ekwentị gam akporo m?
Banyere: Usoro kachasị mma iji hazie ọrụ na Firefox
DupeGuru: Kpochapu akwukwo nile ya na ngwa oru ya